सपना किन र कसरी देखिन्छ ? सपना बारे केहि रोचक जानकारी::News from Nepal
धेरै मानिसले नियमित सपना देख्ने गर्छन् । सपना पनि फरक–फरक प्रकृतिका हुन्छन् । कहिले रोमान्टिक सपना देखिन्छ त कहिले डरलाग्दो । तर, यस्ता सपनाबारे समाजमा अनेक भ्रम छन् । सपनालाई नै आधार बनाएर भविष्यवाणीसमेत गरिन्छ । सपनाबाट सुखद वा दुःखद दिन भनेरसम्म किटान गरिन्छ । उसो भए किन देखिन्छ त फरक–फरक सपना रु मनोविद् गोपाल ढकालले यसरी बताएका छन् ।
किन देखिन्छ सपना र?
दिन राम्रो बनाउनु छ भने बिहानै गर्नुस यी काम
निरोगी रहने सात सुत्र